dial-up internet connection sharing — MYSTERY ZILLION
dial-up internet connection sharing
June 2008 edited March 2009 in Networking
dial-up internet connection ကို share လုပ်ပြီး နှစ်လုံးသုံးချင်တာ ... မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်။
computer နှစ်လုံးစလုံးက Windows XP ပါ။
Help and Support ထဲကပြောထားတဲ့အတိုင်း လုပ်ကြည့်ပြီးပါပြီ။ ကူညီကြပါအုံး။
nyinge wrote: »
ကိုညီငယ်ပြောတာ မရှင်းလို့ ။ ဥပမာ dial-up ကို No.1 အလုံးက ချိတ်ထားတယ်ထား ( User Name /Password ရိုက်ပြီး) အဲဒီ တစ်လုံးကိုမှ No.2 ကနေလှမ်းချိတ်တာလား ?? ဒီလိုပြောတာလား ။ ကျွန်တော်ဖြစ်ဖူးတာကတော့ ကျွန်တော့် account ကို သူငယ်ချင်းကိုပြောပြလိုက်တယ် သူကလည်းချိတ်လို့ရတယ် ။ သူသုံးနေတဲ့ အချိန်မှာဘဲ ကျွန်တော်က နောက်စက်တစ်လုံး ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ ထပ်ချိတ်ကြည့်တယ် ။ အခုထိအဲလိုသုံးနေကြတာ :D အဆင်ပြေနေပါတယ်။ connection ပိုင်းကလည်း ထိထိရောက်ရောက်ကြီးနှေးသွားတာမျိုး မဖြစ်ခဲ့သေးပါဘူး ။ ဆက်ဆွေးနွေးကြည့်ပါ ။ အစ်ကို လိုချင်လောက်တဲ့ အဖြေတစ်ခု ရပါစေ :67::67:
ကျေးဇူးပဲ .. ကို JohnKo ရေ ... :1: :1: :1:
dial-up ကို No.1 အလုံးက ချိတ်ထားတယ် ( User Name /Password ရိုက်ပြီး) အဲဒီ တစ်လုံးကိုမှ
No.2 ကနေလှမ်းချိတ်တာကို ပြောတာပါ။ ....
Client စက် (No.2 စက်) မှာ ...IE configuration အတွက်
Windows XP ရဲ့ Help and Support မှာ ပြောထားတဲ့
Open [URL="http://www.mysteryzillion.com/forums/ms-its:C:\_WINDOWS\_Help\_netcfg.chm::/EXEC=IEFrame, iexplore.exe CHM=ntshared.chm FILE=alt_url_windows_component.htm"]Internet Explorer[/URL].
automatic configuration script အတွက် ... ဘယ် IP ကိ်ုထည့်ရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။
နောက်ပြီး .... proxy setting အတွက်က ... modem နဲ့ တိုက်ရိုက်ချိပ်ထားတဲ့ စက်ရဲ့ workgroup
network IP address ကိုပဲထည့်ရမှာလား .... ဒါမှမဟုတ် ... ISP ရဲ့ proxy IP
(ကျွန်တော့် dial-up ဆိုရင် ygncache.mpt.net.mm, port 8080) ကိုပဲထည့်ရမှာလား။
ဖြစ်နိုင်ရင် ... ပြည့်ပြည့်စုံစုံ သိချင်ပါတယ်။ plz:
ကို ညီငယ် ပြောသလိုဆို အစ်ကို့ စက် No.1 နဲ့ No.2 ကို ချိတ်ပြီးသွားပြီလို့ယူဆပါတယ် (LAN configuration လုပ်ပြီး) အခုဟာက အစ်ကိုက IE browser သုံးတယ်ဆိုတော့ IE ရဲ့ config ပိုင်းလေးမှာ နည်းနည်းပြင်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားမယ်ထင်ပါတယ်။
IE ရဲ့ LAN Setting ထဲမှာ Automatically detect settings ကို click ထားလိုက်ပါ။ နောက်ပြီး
Useaproxy sever for your LAN ကို click လုပ်ပြီး Address ထဲမှာ အစ်ကို့ No.1 စက်ရဲ့ IP ထည့်ကြည့်ရင်ကော ... :39::39: ဒီလိုမှမရရင်တော ့:68::68: အနော်လည်းရှာကြံမေးမြန်းရတော့မယ်
စိတ်မပူနဲ့ :67::67: ကျွန်တော် အဆင်ပြေတဲ့အထိ ကူရှာပေးမယ် :6::6:
IP ထည့်စရာမလိုဘူးလေ... Direct Connect to internet ဖြစ်နေပြီလေ.... No.1 ကတော့ dial-up ကို share ပေးထားရမယ်... နောက်ပြီး dial-up ကို HTTP , HTTPS စတာတွေကို allow လုပ်ထားပေးရမယ်.... ဒါမှ အင်တာနက် ရမှာ... ဟိုဘက်ကတော့ IP ထည့်လိုက်ရင် Gateway ကို No.1 ရဲ့ IP ပေါ့... No.1 ကလည်း သူ့ IP နဲ့ gateway ကို အတူတူပဲထားလိုက်.... dial-up connection ကိုတော့ share လုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်... အဲဒါဆို network ချိတ်လိုက်တာနဲ့ အင်တာနက်ရတယ်... browser setting တွေကတော့ No1 နဲ့2အတူတူပဲပေါ့..
use cross Ethernet cable to make local network and set dail up computer to allow "allow this computer to pass internet setting ....."
sorry not sure, but it work in XP i remmeber
အဆင်ပြေသွားပြီဗျို့ .... အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ...
IE configuration မှာ ISP ရဲ့ dial-up proxy setting ကိုပဲ ထည့်လိုက်တယ်....
အရင်ကမရတာက ... Network Connections ထဲမှာ internet share လုပ်ထားတဲ့ icon
ကိုမပေါ်ဘူး။ အခုတော့ ပေါ်လာပြီး IE settings ချလိုက်တာ .... ok မှာ ဆိုပြေသွားပြီ ....
အားလုံး ..... thanks ..... :1: :1: :1:
dial up တော့ မဟုတ်ပါ။
အင်တာနက်ကို ၂ လုံးပဲ သုံးချင်တယ်ဆို။ router နဲ့ မဟုတ်ပဲ။ တခြားဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲမသိဖူး။ ၂ လုံးထဲ သုံးမှာဆိုတော့။ NIC ၂ ကဒ်နဲ့သုံးလို့ရပါလား။
ရတယ်ဆိုရင်။ NIC ၂ ကဒ်ရှိတဲ့ စက်က အမြဲဖွင့်ထားဖို့လိုမလား။ တခြားစက်ကနေ အင်တာနက်သုံးချင်တယ်ဆိုရင်။
ထွေထွေထူးထူး စဉ်းစားမနေနဲ့လေ router ၁လုံး သွား၀ယ်လိုက် ... အဲဒါဆို ကွန်ပျူတာ တစ်လုံး အမြဲတမ်းဖွင့်ထားစရာမလို့တော့ဘူး ....... router configure ကလည်းမခက်ဘူး တောင်စမ်း မြောက်စမ်းနဲ့ ရလိမ့်မယ် ....
ကို Cyberhack ရေ အကိုပြောသလို router ဝယ်ဖို့တော့ရတာပေါ့အကိုရာ။
သက်သာလို့ သက်သာငြားသိချင်လို့ပါ။ :P သိပ်မကွာရင်တော့လဲ။ ဒါမှမဟုတ် အမြဲဖွင့်ထားရမဲ့ ကိစ္စလို အဆင်မပြေရင်တော့လဲ။ နောက်ဆုံးသော.. အဆင့် သင့်တော်သော router ပေါ့။
access kitကိုအချိန်ခိုးလို့ရတယ်တဲ့ ဟုတ်လား:39::39::39:
သူ ခိုးပုံကaccess kit အချိန်ကုန်ခါနီးရင် disconnect မလုပ်ဘဲဆက်သုံးလို့ရတယ််တဲ့
Find about ccproxy in this forum. There I explain how to configure sharing internet.
Actually it was bugs from programmer. That software was coded by MIT, (not so sure). Yes, sometime it can use over 200 hours and sometime 10hours card can use only5to6hours but normally it can use exact hours only.
i want to know auto login MPT authentication... plz explain to me how to make it ... thanks .. pk:((
ကျွှန်တော်ဆီမှာ Server 2003 ကို ISA Server 2006 Enterprise Edition တင်ထားပါတယ်၊
MPT ကပေးတဲ.IP က လည်းDynamic ပါ...အဲ.ဒါကျွှန်တော် အမြဲ Inernet Explore ကိုသွားပီးသူ.ရဲ.WebInterface ကို login လုပ်မှသာ INTERNET Access ရတာပါ..အဲ.ဒီလိုလုပ်နေရတာစိတ်ပျက်လာလို.Auto Login လုပ်လို.ရတဲ.နည်းလမ်းလေးများရှိရင် မ စ ပါဦး။။ :106: